Fanoloana eny ifotony :: Antomotra ny fanendrena an’ ireo sefo fokontany vaovao • AoRaha
Fanoloana eny ifotony Antomotra ny fanendrena an’ ireo sefo fokontany vaovao
Hiroso amin’ny fanendrena an’ireo sefo fokontany vaovao eto Antananarivo renivohitra ny fitondrampanjakana, ato ho ato. Nambaran’ny jeneraly Ravelonarivo Angelo, Préfet –n’ny polisy eto Antananarivo renivohitra, omaly, fa efa miomana amin’ny fandraisana ny lisitr’ireo sefo fokontany ireo izy, ankehitriny. «Tokony tsy ho ela ny fivoahan’io lisitra avy any amin’ny distrika io. Anjarako avy eo ny manao ny fanendrena azy ireo », hoy izy tamin’ny antso an-tariby.
Baiko nomen’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry ny fanasaziana an’ireo lehiben’ny fokontany voamarina fa nanararao-pahefana tamin’ny fizaràna ny Vatsy Tsinjo andiany voalohany, satria niteraka fahatezerana teo amin’ny ankamaroan’ny mponina teto an-drenivohitra. Samy nanao tatitra momba izany na ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta na ireo lehiben’ny distrika eto amin’ny kaominina Antananarivo.
« Miomana amin’izany fanoloana izany tokoa izahay. Na izany aza, tsy azo irotorotoana ny fanendrena olona vaovao. Ankoatra ny Vatsy Tsinjo dia misy koa ireo sefo fokontany tsy mahavita ny asany intsony ka tsy maintsy soloina », hoy ny lehiben’ny distrika iray eto an-drenivohitra.
Tsy nanome ny isan’ireo sefo fokontany noesorina teo amin’ny toerany ka hosoloina vaovao ny «Préfet». Hany fantatra fotsiny ny fiantefan’ny fanoloana olona am-polony maro.
Miisa folo, ohatra, ireo lehiben’ny fokontany nalàna teo anivon’ny Boriborintany fahefatra. Voalaza fa mifanahantsahana amin’io tarehimarika io koa ny an’ny hafa, afa-tsy ny an’ny Boriborintany fahatelo, izay hametrahana sefo fokontany vaovao manodidina ny dimy.
Handray toerana vonjimaika ihany anefa ireo sefo fokontany vao hotendrena. Efa nambaran’ny minisitry ny Atitany sy ny fitsinjarampahefana, Razafimahefa Tianarivelo fa « hisy ny fanatontosana ny fifidianana lehiben’ny fokontany, rehefa tapitra tanteraka ny hamehana ara-pahasalamana ».